Somaliland: Dawladda Hoose ee Hargeysa oo Soo Bandhigtay 12 Waddo oo ay ku Hagaajiyeen Muddo Gaaban - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dawladda Hoose ee Hargeysa oo Soo Bandhigtay 12 Waddo oo ay...
Maamulka Dawladda Hoose ee Caasimadda, ayaa soo bandhigay casriyayn iyo dayactir ballaadhan oo ay ,ku sameeyeen 12 waddo oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada Hargeysa oo ay labadii bilood ee u dambeeyay hagaajiyeen oo dadweynuhu ku ammaaneen.
Xoghayaha Dawladda Hoose Hargeysa, Cali Xasan Cawaalle ayaa sheegay in horu-socodkan ay ku ammaan wadajir u qabteen maamulka caasimadda iyo Golaha degaanku. Waxaanu sidaas ku sheegay qoraal uu xalay ku baahiyay bartiisa facebook, waxaanu qoraalkaasi u dhignaa sidan:-
“Iyadoo ay jiraan waxqabad iyo horumar la taaban karo oo ay hore iyo haddaba ugu talaabsatay D/hoose ee Hargeysa oo aanan halkan ku wada xusi karin, Waxaan halkan ku xusayaa horumarka dhinaca waddooyinka ee ay fuliyeen maamulka D/hoose ee Hargeysa iyo Golahooda Degaanku.
Maamulka D/hoose ee Hargeysa iyo Golaha Degaanku waxay fuliyeen dhismayaasha waddooyinka halbawlaha ah ee caasimadda.
Haddii aynu eegno labadii bilood ee u danbeeyay ee sannadkan 2017, waxay D/Hoose ee Hargeysa hirgalisay dhismaha waddooyinkan hoos ku xusan kuwaas oo qayb muhiima ka qaatay adeegyadii bulshada iyo isu socodka magaaladan caasimadda ah. Waana kuwan hoos ku xusan:-
1- Dhismaha Waddada hormarta Maxkamadaha.
2- Dhismaha Jidka hormarta xarunta laanta danbi baadhista
3- Dhismaha Waddada u baxda State houska.
4- Dhismaha jidka isgoyska hormarta guriga madaxweyne ku-xigenkii hore Axmed Yuusuf Yaasin
5- Dhismaha laamida weyn ee halbawlaha ah ee daba marta dhakhtarka weyn oo la gaadhsiiyay ilaa tiyaatarkii Hargeysa.
6- Dhismaha waddada isgoyska Deero Mall.
7- Dhismaha laamida Togdheer illaa isgoyska baar Hargeysa
8- Dhismaha waddada isgoyska hormara dugsiga Sheekh Bashiir
9- Dhismaha waddada isgoyska khayriyada Hargeysa
10- Dhismaha waddada hormarta jaamacada Hargeysa
11- Dhismaha waddada Ex Ina Naxar.
12- Dhismaha Waddada halbawlaha ah ee hormarta
Dhakhtarka Edna Aadan.”
Dawaladda Hoose ee Hargeisa